Kordhinta galmada-qeybiyaha xoojinta galmada Bolise Co., Xaddidan
Hordhaca kooban ee kobcinta galmada
Wax soosaarka wax soo saarka cusub ee waxtarka iyo sare leh waa faa'iidooyinkayaga tartanka.Waxaan ku hawlan nahay horumarinta alaabta ceyriin ee kor u qaadista jinsiga labka iyo dheddig, miisaanka luminta iyo dufanka dhiigga hoos u dhaca, tikniyoolajiyadeena cilmi baarista iyo qalabka casriga ah waxay awood u siinayaan alaabteenu inay waxtar badan yeeshaan, aaminna yihiin Qiimaha tartanka ee suuqa, waxaan awood u leenahay miisaanka ceeriin ee ugu horumarsan uguna cusbaa, alaabada ceeriin ee labka iyo dhaddig ee alaabada caafimaadka qabta. Nooc kasta oo walxaha kiimikada ceyriinka ah ayaa lagu soo saari karaa kaabsal, kiniin, cabitaan afka ah iyo khamri, in ka badan 99% daahir ah, oo loo daabuli karo aduunka oo dhan.Cilligan, in kabadan toban nooc oo lab iyo dhedig ah oo xoojiya galmada iyo culeyska miisaanka oo yaraada alaabta ceyriinka ah ayaa la heli karaa. Shirkad caalami ah oo masuul ah, kuma qanacsani guusha aan hadda gaarnay, laakiin waxaan marwalba ku howlannaa hagaajinta iyo hoyga hada waxaan soosaaraynaa waxsoosaarka miisaanka oo yaraada, waxsoosaarka naasaha, alaabada ceeriin ee lab iyo dhaddig si loo daboolo baahida gudaha iyo tan caalamiga ah ee la badali karo.
Waxyaabaha kor u qaada galmada waxaan u bixin karnaa sida soo socota:
Waxyaabaha ceyriinka ah ee xoojiya galmada raga / raga
Dabeecad: Dhirta laga soosaaray dhirta, oo aan lahayn waxyeello iyo sunta, jawaab deg deg ah, oo toos ah qiyaasta afka iyo buuxinta kaabsolka.
Dabeecad: way u cad tahay budada kareem cad-cad, ur aan lahayn ， dhadhan qadhaadh, ku milma biyaha iyo ethanol, Vardenafil waa dawo afka laga qaato oo loo isticmaalo daweynta itaal darrida.
Astaamaha: Waa daawo cayriin lagu daaweeyo daawo, oo loogu talagalay daaweynta cillad aan caadi ahayn.
Hantida: budada cad ee dhalada ah taste dhadhan qadhaadh ， dhadhan qadhaadh, ku milma biyaha iyo ethanol, xoojinta Sildenafil Citrate
Fasalka Daroogada iyo Farsamada: Tadalafil waa dawo afka laga qaato oo loo isticmaalo daweynta itaal darrida (awood la'aanta in la gaaro ama la ilaaliyo kacsiga xubinta taranka). Waxay ku jirtaa nooc daroogo ah oo loo yaqaan 'phosphodiesterase inhibitors'.
Dabeecad: Badeecadani si heer sare ah ayaa loogu sifeeyay dhagxaanta budada cad oo ku milmi kara biyaha iyo ethanol laakiin kuma milmi karto dufanka. Waa mid aan ur lahayn oo qadhaadh leh nadiifsanaanta ka sarreysa 99.95%.
Dabeecad: Farsamaynta ficilka Sildenafil citrate waxay ku lug leedahay sii deynta nitric oxide (MAYA) gudaha corpus cavernosum ee guska.
Astaamaha: Kaniisadda budada u eg ee huruudda ah oo ay fududahay in lagu milmo biyaha, aalkolada iyo dufanka, oo aan lahayn wax ur gaar ah.
Waxyaabaha miisaanka lagu dhimayo alaabta ceeriin
Waxqabadka: Babutramine, oo leh qaab isku mid ah sibutramine, waa wakiil afka laga qaato oo loogu talagalay daaweynta buurnaanta. Badanaa waxay wax ku noqotaa iyada oo loo marayo dheef-shiid kiimikaad amine
Ka-cad-cad illaa budada cad ee cad, lagu qasi karo methanol.Rimonabant waa xulasho antagonist soo-dhoweeye ah oo loo yaqaan 'CB1 endocannabinoid receptor antagonist' oo loogu talagalay daaweynta buurnaanta.
Sharaxaad: Xenical waa daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo buurnida. Shaqadeeda aasaasiga ahi waxay ka hortageysaa nuugista dufanka cuntada aadanaha, taas oo yareyneysa qaadashada kalooriga.
Hantida: badeecooyinka dabiiciga ah, oo aan lahayn wax sun ah iyo waxyeellooyin, saameyn dhaqso ah, shuban la'aan, qiyaasta afka ee tooska ah iyo buuxinta kaabsolka.
Hantida: Sibutramine hydrochloride monohydrate waa cadaan cad-cad oo budada dhagxaanta ah, ama kareem cad oo budada kareemka ah, aan lagu milmi karin biyaha laguna milmi karo aalkolada miraha.
Sharaxaad: Lipstatin waa awood awood leh, oo aan ka-noqosho lahayn oo ah lipase pancreatic. Waa badeecad dabiici ah, oo markii ugu horreysay laga soocay Actinobacterium Streptomyces toxytricini.
Dumarka / kacsiga galmada dumarka
Fly Powder waa kicinta galmada ee isticmaalka dumarka iyada oo aan midab iyo ur lahayn waxayna si fudud ugu milmi kartaa biyaha iyo aalkolada. Dhowr daqiiqo ka dib qaadashada, haweenku waxay ku yeelan doonaan dareen cuncun xubintooda taranka. ...
Qalabka ceyriinka wadnaha
Isdhaxgalka alaabta: Angelica, Mastic, Xididka Astragalus, Honeysuckle, Wormwood Anomalous, Radices Sileris, Roar Divoricate Saposhniovia Root, Caladium, Semen Persicae, Kakuda Figwirt Root ...
Waxyaabaha ceyriinka ah ee lagu daaweynayo cudurka macaanka
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: gingkgo, fructus crataegi, barrenwort epimedium, yam, cacti, buckwheat duurjoogta ah, jimicsiga PE, fructus momordicae, abuur fenugreek caadi ah iwm
Wax cayriin Anticancer
Waxay kordhin kartaa saameynta daaweynta kiimikada, waxay hagaajineysaa shaqada difaaca jirka ee bukaanka, waxay xoojineysaa iska caabinta jirkaaga waxayna hagaajineysaa tayada nolosha bukaanka ...
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka barato macluumaadka ku saabsan xoojinta galmada, Ku soo dhawow nala soo xiriir!
Waxaad awoodi kartaa nala soo xiriir si aad u ogaato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xoojinta galmada.